The Xiaomi Mi Mix 2s ayaa nuqulaya isdhexgalka astaamaha iPhone X | Wararka IPhone
Sanadihii la soo dhaafay, waxaan aragnay waxyaabo badan oo ka mid ah astaamaha cusub ee ku yimid macruufka, waxay si cad ugu waxyoodeen qaar ka mid ah istiraatiijiyada ugu caansan ee JAILBREAK. Ansixintaan ay soo saartay macruufka macnaheedu waxa weeye in qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala JAILBREAK aysan mar dambe xiiseyneynin in ay qalabkooda ku sii daayaan.
Ilaa maantadan la joogo waxaa jira waxyaabo aad u yar oo faa iido leh oo aan aqbalin Apple sanadihii la soo dhaafay. Mid ka mid ah kuwii ugu dambeeyay oo kaliya laga heli karo iPhone X waa midka na oggolaanaya ka mari shaashadda hoosteeda si aad u furto shaqooyin badan oo u kala wareeji codsiyada ugu dambeeyay ee aan furnay.
Tani JAILBELY JAILBREAK cajiibka ah, kaas oo Apple horeyba u fulin lahaa qalab kale, in kasta oo ay macno badan u leedahay in laga heli karo oo keliya iPhone X, sidoo kale Waxay noqon doontaa mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee ay ina tusayso Xiaomi Mi Mix 2s ee soo socda, jiilka seddexaad ee Xiaomi Mi Mix, terminal ka yaabisay dadka deegaanka iyo shisheeyaha markii uu suuqa ku dhacay ku dhowaad laba sano ka hor. In kasta oo xilligan aysan jirin taariikh loo qorsheeyay in suuqa la dhigo jiilkan saddexaad, haddana fiidiyoow horay ayaa loo soo daadiyey taas oo aad ka arki karto sida ay u shaqeyso.
Sida aan ku arki karno fiidiyowga, si aan u helno howlo badan waxaan kaliya farta kaa siineynaa salka hoose ilaa aan tusno codsiyada ugu dambeeya ee furan. Gaar ahaan wuxuu soo jiitaa dareenka in isdhexgalka ay ina tusaysaa uu yahay mid isku mid ah oo aan ka helno iPhone X, gaar ahaan maxaa yeelay isku xirnaanta Android marka aan marinno hawlo badan maahan sidaas, laakiin waxay na tuseysaa codsiyada qaab kaararka ah midba midka kale waana inaan hoos ugu foorarnaa ama hoos ugu soo dhacnay si aan u helno arjiga aan dooneyno inaan ku laabanno fur.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Xiaomi Mi Mix 2s wuxuu nuqul ka sameeyaa isdhexgalka astaamaha iPhone X
Way fiicnaan laheyd in la dhaho MAAHA 2S, waa isku qas 2 caadi ah oo la rogay.
Ku jawaab Moria
Maqaal wanaagsan, macluumaadka qaar ayaa maqnaa, laakiin maqaal wanaagsan / s
Jawaab Raúl Diez Martín
Haddii aan helno xulasho, Apple ayaa ka soo guurisay tilmaamahan WebOS-ka Palm Tree. Midkood in la beddelo App-ka iyo midka la xidho labadaba. Marka Apple waa inaysan qaadan qodobkaan sidoo kale.